Tag: iskudhafid | Martech Zone
Fiidiyow: Xeeladaha Goobid ee Deegaanka ayaa Fure u ah Calaamadaha waaweyn
Friday, May 11, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Qoraal dhaweyd aan ku sameynay 6 Qodob oo khaldan oo khaldan ayaa ka hadlay fikirka khaldan ee ah in ganacsiyada qaranka ama kuwa caalamiga ah ay ka fogaadaan raadinta maxalliga ah. Kaliya maahan fikrad khaldan, waa qalad weyn. Sameynta istiraatiijiyad SEO ah oo kugu darajaynaysa gobol ahaan waxay noqon kartaa tartan yar, waxay u baahan tahay ilo yar, waxayna kordhisaa guud ahaan soo noqoshadaada. Mana hoos u dhigayso inaad ku darajooto ereyada muhiimka ah ee aan juqraafi ahayn ama weedho. Waxyaabaha ka soo horjeedka ah, darajada si wanaagsan ee gudaha waxay u horseedi kartaa darajadaada qaran iyo caalami ahaanba
Hal-abuurnimo iyo xuquuq-lahaansho
Arbaco, Juun 9, 2008 Arbaco, Juun 9, 2008 Douglas Karr
Tani waa, laga yaabee, mid ka mid ah doodaha ugu fiican ee sida sharciyada xuquuqda daabacaadda (IMO) aysan si fudud u ahayn caddaalad darro, laakiin sidoo kale waxay caqabad ku tahay hal-abuurka dhaqankeenna. Xanuunka ay keeneen sharciyadan waxaa sii xumeeyay qarxinta fursada uu internetka na siinayo. Xitaa ka sii macaan ayaa ah in farriinta iyo taariikhda ay ka wada hadlayaan halkan Larry Lessig, oo ah qareen. Koofiyad Koofi ah Lorraine si loo helo!
Waa maxay Yooba?
Khamiista, Febraayo 14, 2008 Douglas Karr
Kaliya waxaan ka helay qoraal ogeysiis ah (cinwaan weyn) Yooba.com, oo ah adeeg ku saleysan websaydh oo isu diyaarinaya inuu soo saaro guga. Fiidiyowgu waa wax yar oo qarsoodi ah laakiin waxyaabaha ku jira bogga ayaa ku qasbaya: Yooba waa adeeg ku saleysan B2B websaydh ah oo loogu talagalay xirfadlayaasha suuqgeynta. Ujeedadayadu waa inaan kuu suurta galino inaad diirada saarto hal abuurka iyo guulaha. Yooba wuxuu ku siinayaa madal loo dhan yahay oo loogu talagalay khibraddaada suuq-geynta dijitaalka ah. Waxaan bixinnaa marti gelin iyo xog ururin